Faka isicelo ngoku kwiiJuniorists zezoQoqosho (iFirm Service yangaphakathi) Isithuba: Iindaba zeSikolo ngoku
Faka isicelo ngoku kwiiJuniorists zezoQoqosho (iNkonzo yangaphakathi yeFirm) kwiPricewaterhouseCooper (PwC)
Kufakwe kuyo umsebenzi by Abasebenzi bokuhlela ngoJuni 18, 2021
Faka isicelo ngoku kwiiJuniorists zezoQoqosho (iNkonzo yangaphakathi yeFirm) 2021: I-PricewaterhouseCooper ifunela iiJunior Economists. Umgqatswa ofanelekileyo kufuneka abe nobuncinci be-Bachelor's Degree kwisiNgesi, kwiMathematika, kwiSayensi yezeNtlalo okanye kuqeqesho lwezoQoqosho.
PwC iifemu zinceda imibutho kunye nabantu ukuba benze ixabiso abalifunayo. Sinothungelwano lweefemu kumazwe ali-158 anabantu abangaphezulu kwe-180,000 abazinikeleyo ekuhambiseni umgangatho kuQinisekiso, iRhafu kunye neenkonzo zeNgcebiso.
Sijonge umlawuli ukongamela uthethathethwano olwenza ukuba abathengi bethu bafumane inzuzo yokhuphiswano kwimisebenzi yabo.
Iindawo ezithile ekugxilwe kuzo zibandakanya ukwenziwa kweMisebenzi, uyilo lweemodeli zokusebenza, Uhlalutyo lwenkqubo kunye noyilo, ukuSebenza ngokuNikezela ngeeKhonkco, ukulawulwa kweendleko, Uhlalutyo lwezeMali, uLawulo loBudlelwane baBathengi (CRM) kunye neProjekthi / uLawulo lweNkqubo.
Okwangoku sigaya ukugcwalisa le ndawo ingezantsi:
Isihloko somsebenzi: Uqoqosho lweJunior (iNkonzo yoQinisekiso lwaNgaphakathi)
Inombolo yereferensi: 125-NIG00104
ISebe: IiNkonzo zeFirm yangaphakathi
Yenza uphando olukumgangatho kunye nobungakanani phantsi kwesikhokelo sezoQoqosho, ngokubonelela ngegalelo kuphando kunye nohlalutyo lwedatha kwi-PwC yaseNigeria yezoQoqo zezoQoqo kunye nolunye upapasho lobuNkokeli.
Ukubeka iliso ekuphuhlisweni kweendlela eziManyeneyo nezasekhaya kumashishini ohlukeneyo, lindela utshintsho kwimo yezemali nakwezemali kunye nolwalamano olusisiseko sokuziphatha usebenzisa iindlela zokwenza imodeli
Ukusetyenziswa kwezixhobo zobugcisa: uhlalutyo lweemarike, imodeli yeshishini, isicwangciso-nkqubo, uvavanyo lwenkqubo kunye nemodeli yoqoqosho ekuphuhliseni izisombululo zabaxumi
Sebenza kuthethathethwano olucelomngeni kwinethiwekhi ye-PwC kwiprojekthi
Ukunxibelelana nokubandakanya abathengi kwiindlela ezivelayo zoqoqosho nezorhwebo ezisekwe kwimveliso yohlalutyo lwethu
Gcina iingcamango zobunkokeli kunye neenkcukacha zeMacro; Ukuqinisekisa ukufikeleleka kwenethiwekhi enkulu yePwC yeNigeria
Sebenza namanye amaqela oshishino ukunikezela ngokuboniswa kwabaxumi kunye nezicelo zolwazi, ukumela iqela ezintlanganisweni, ukuhambisa amandla e-PWC kubathengi
Imfundo: IsiGanga sezoQoqosho / ezeMali / iMathematika
Iimfuno zeBakala: 2: 1 nangaphezulu
Amava akukho ngaphezu kweminyaka emi-2 yamava njengoqoqosho lwezoqoqosho okanye umhlalutyi
Amava omsebenzi afanelekileyo, izakhono zohlalutyo oluqinisekileyo kwicandelo loqoqosho olukhulu kunye nohlalutyo lwezezimali.
Umdla kwimicimbi ye-macro kunye neyasekhaya kunye nokuqonda kweemarike zezemali.
Unxibelelwano olugqwesileyo phakathi kwabantu kunye nezakhono zokubonisa, kubandakanya ukubanakho ukunxibelelana ngemiba yobuchwephesha ngendlela elula, ngomlomo nangokubhala.
COFA APHA ufuna ulwazi olungolunye.
Ukuba ukhethwe kuluhlu olufutshane, kuya kufuneka unyawo lwakho luye emnyango. Kwaye lixesha lokuba ukhanye kwinqanaba lokugqibela- udliwanondlebe.
Nangona kunjalo, inokuba yifowuni, i-Skype, okanye udliwanondlebe ngobuso. Kwaye oku kuxhomekeke kumqeshi. Xa kuluhlu olufutshane:
Zama ukufumana ulwazi malunga nenkampani.
Qiniseka ukuba unombono ocacileyo. Zama ukuqonda ukuba kutheni ufuna isikhundla esithile. Kwaye ungakulunga njani. Kwakhona, hamba ngokufaka isicelo sakho.
Ukongeza, sebenzisana. Ludliwanondlebe, hayi ukubuza imibuzo. Kuninzi kakhulu kuwe kunokuqhubeka kwakho.
Ukuziqhelanisa kuhamba indlela ende. Ke, thatha udliwanondlebe oluhlekisayo kunye nabahlobo bakho okanye uziqhelise ukuthetha phambi kwesipili.
Akunqabile, kodwa ngamanye amaxesha ufumana ileta enikezelwa ngokuthe ngqo kwisicelo sakho. Uqala ukucwangcisa umbhiyozo, kodwa khumbula amanye amanqaku ngaphambi kokuba ungene kwimo yepati: Yifumane ngokubhaliweyo.
Kwakhona, yiya kwisibonelelo esibhaliweyo ngokweenkcukacha. Qiniseka ukuba zonke iinkcukacha ezibalulekileyo zikhankanyiwe kwaye ubuze imibuzo ukuba awuqondi nto. Njengeprofayile yomsebenzi, umhla wokuqala, ubude bexesha, kunye nomvuzo, njl.
Thumela ileta yombulelo kumqeshi, nje ukuba usamkele eso sicelo.
Kwakhona, landela nge-imeyile eqinisekisa umhla wakho wokuqalisa kwaye uchaze umdla wakho kwindima yakho entsha.
Ukusuka apha ngasentla, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba asisebenzisani nezi nkampani. Senza ukuba olu lwazi lufumaneke ukuze sikuncede ufumane loo msebenzi uphuphayo. Kananjalo, njengoko ufaka isicelo, qinisekisa ukwenza uphando ngakumbi malunga nenkampani. OKUHLE KODWA.
Iimpazamo ekufuneka uziphephe ngelixa usenza isicelo
Uninzi lwabantu luyasilela kwizicelo ezininzi hayi ngenxa yokuba bengafanelekanga, kodwa ngenxa yeempazamo ezininzi. Qaphela ke oku kulandelayo:
Faka isicelo ngexesha, ungalindi umhla wokugqibela.
Yenza iinkqubo zesicelo uwedwa, ungathumeli nabani na ukuthintela iimpazamo kwidatha yakho
Zigcine uhlaziywa malunga nesicelo
Qinisekisa ukuba unikezela zonke iimfuno eziyimfuneko
Thatha ixesha lokukhangela iinkcukacha zakho ngaphambi kokungeniswa.
Abaviwa mabafake isicelo somsebenzi omnye, Abaviwa abazama ukufaka izicelo amaxesha amaninzi baya kuba nesicelo sabo singenakulungeleka
Isicelo se-Intanethi simahla.
Izithuba ezishushu eNigeria ngoku
Ukuqeshwa kukaRhulumente ngurhulumente 2021;
Imisebenzi yeNIA eNigeria;
Ukuqeshwa kweNigeria iyonke;
Ukuqeshwa kwabasebenzi baseNigeria;
Ukuqashwa kwamapolisa eNigeria;
Ukuqashwa kweNkonzo yaseNigeria;
Ukuqeshwa kweNkonzo yoMlilo kaRhulumente;
Ukugaywa kwabasebenzi kwezokhuseleko ezindleleni ngo-2021;
Ukuqeshwa kwe-Federal Inland Revenue 2021;
Ukuqeshwa kweNkonzo yamaNtu eNigeria;
Imisebenzi yeoyile kunye neGesi eNigeria;
Iinkampani eziPhezulu eNigeria eziGunyazisa ukuThathwa okuNinzi kule Nyanga;
Imisebenzi ye-ICRC eNigeria;
Nangona kunjalo, siyakholelwa ukuba olu lwazi kwi-PricewaterhouseCooper (PwC) eMisebenzi eNigeria 2021 iluncedo kuwe? Kutheni ungabelani nabahlobo bakho phaya ngokunqakraza kwiqhosha lesabelo kule webhusayithi.
Ungabhalisela kwakhona ukuhlaziywa ngeenkcukacha ezithe vetshe malunga nesi sihloko.
Ukuba ufuna sikuncede ngolwazi oluhlaziyiweyo ngexesha elifanelekileyo malunga nokuFaka isicelo ngoku kwiiJuniorists zezoQoqosho (iNkonzo yangaphakathi yeFirm) Isithuba se2021.
Nceda usinike inombolo yakho yefowuni kwaye idilesi yemeyile kwibhokisi yezimvo engezantsi.
Yintoni oyithathayo ngoku Faka isicelo ngoku kwiiJuniorists zezoQoqosho (iNkonzo yaNgaphakathi yeFirm) Isithuba 2021? Ndiyakubongoza ukuba usebenzise le nto inye ithuba Ukwabelana nabanye ngolu lwazi sisebenzisa eyethu Facebook, Twitter, or Uphando+. iqhosha lokwabelana ngezantsi.
IPricewaterhouseCooper (PwC) Ukuqeshwa kwabaNcedisi kuLawulo lwaBaphumeleleyo ngo-2021
Faka isicelo ngoku ngokuQesha okuqhubekayo ePricewaterhouseCooper (PwC) 2021 Uhlaziyo
Faka isicelo ngoku kwi-IT yesicelo seNkxaso yoMhlalutyi kwiNkampani kaRhulumente kaRhulumente
Ukufunyanwa kwabantu kuRhulumente waseLagos ngo-2021/2022
Iinkonzo eziHlangeneyo zeFez Portal Job Portal 2021
UMichael Stevens wokuNxibelelana nokuGaya abantu abayi-2021/2022 kwiFomu yeSicelo sePortal
Ixabiso leWaterHouseCooper kwiZithuba zeZithuba zoMsebenzi 2021 www.pwc.com.ng
tags: Faka isicelo ngoku kwiiJuniorists zezoQoqosho (iNkonzo yangaphakathi yeFirm) kwiPricewaterhouseCooper (PwC), Faka isicelo ngoku kwiiJuniorists zezoQoqosho (iNkonzo yangaphakathi yeFirm) kwiPricewaterhouseCooper (PwC) 2021, UJuniorists wezoQoqosho (iNkonzo yaBaQinayo baNgaphakathi) Isithuba, Imisebenzi yaseLagos, IxabisoWaterHouseCooper
« Faka isicelo ngoku ngokuQesha okuqhubekayo ePricewaterhouseCooper (PwC) 2021 Uhlaziyo
Ukufumana ukuSebenza ngokuBambisana kukaSekela-Mlawuli we-2021 »